Jereo ny Ben'ny tanàna Plaza ao Salamanca | Vaovao momba ny dia
Plaza Ben'ny tanànan'i Salamanca
Mandehana mitsangatsangana any Salamanca dia mitsidika tanàna tsara tarehy miaraka amina tanàna tranainy tsara fikajiana. Ny iray amin'ireo toerana izay manintona antsika indrindra amin'ity tanàna ity dia tsy isalasalana fa ny Ben'ny tanàna Plaza Salamanca, ivon-toerana tena izy eo amin'ny fiainam-piarahamonina nandritra ny taona maro. Kianja efa tranainy izy io, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba barokao izay gaga amin'ny firindrany lehibe.
Ity iray ity plaza manana tantara mahafinaritra ary miatrika asa-kanton'ny tena zavakanto koa izahay izay tsy ampoizina satria ny endriny dia mitovy amin'ny an'i Madrid. Ho hitantsika ny nahatonga an'ity kianja tsara tarehy izay mariky ny Salamanca androany ity sy izay azontsika fantarina momba azy alohan'ny hitsidihany azy.
1 Tantaran'ny Ben'ny tanàna Plaza
2 Curiosities an'ny Plaza Ben'ny tanànan'i Salamanca
3 Inona no hatao ao amin'ny Ben'ny tanàna Plaza
Tantaran'ny Ben'ny tanàna Plaza
Ao amin'ny toerana misy an'ity Plaza Ben'ny tanàna ity miaraka amin'ny maritrano dia efa nisy kianja taloha izay lehibe kokoa noho ny fanitarana, mandany ny faritry ny tsena sy ny maro hafa. Io no afovoan-tanàna, toerana nisy tsena, hetsika ary fety, ka io no ivon-toerany. Nolazaina fa io no kianja lehibe indrindra ao amin'ny fivavahana lazaina fa kristiana. Efa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo no nipoitra ny hevitra fa ny kianja dia tokony homena toerana lehibe kokoa, toy ny natao tany amin'ny tanàna hafa, ka ny mpanao mari-trano Alberto de Churriguera dia nokaramaina hanangana ny kianja. Rehefa maty ity mpanao maritrano Baroque malaza ity dia namita ny asany i Andrés García de Quiñones.
Ity kianja ity dia manana lafiny sasany izay antsoina hoe tranoheva. Ny voalohany namboarina dia ny pavilion Royal, ilay eo ankavia rehefa manatrika ny famantaranandro. Taty aoriana dia natsangana ilay teo alohan'ny lapan'ny tanàna antsoina hoe pavilion San Martín. Ny asa amin'izao fotoana izao dia nalemy nandritra ny dimy ambin'ny folo taona noho ny olana tamin'ny mponina sy ny tompon-trano sy orinasa voakasiky ny asa, izay voavaha ihany. Ary farany, natsangana ny trano heva an'ny Consistorial, izay misy ny lapan'ny tanàna sy ny an'i Petrineros, ilay eo ankavanana.
Toa nanatsara ny endrik'ilay tany Madrid ity kianja ity, satria vato frantsay no namboarina avy any Villamayor miaraka amina endrika volamena manome azy io firindrana hita maso io, saingy koa satria nakatona tanteraka izy ary ilay tao Madrid dia tsy tamin'izany fotoana izany. Na dia mahita ny azy aza isika anio ny faritra afovoan'ny lampivato volondavenona dia tsy toy izany foana. Ity araben-tany farany ity dia napetraka tamin'ny taona dimampolo fa mandra-pahatongan'izany dia nisy zaridaina afovoany misy hazo, dabilio ary fametahana eo afovoany, misy arofanina boribory manodidina.
Curiosities an'ny Plaza Ben'ny tanànan'i Salamanca
Na dia azontsika atao aza ny mieritreritra fa ity kianja ity dia manana drafitra quadrilatera mahazatra, ny marina dia tsy misy na dia iray aza ny trano heva mitovy amin'ny an'ny hafa, ka tsy ara-dalàna, na dia manodidina ny valo-polo metatra aza izy rehetra. Ny kianja dia misy tohatra 88 semicircular boribory, endrika izay ahitantsika voasoratra eo ambanin'ny iray amin'ireo tohany ao amin'ny pavilion San Martín. Ho fanampin'izay, misy balkon 477 misokatra amin'ny kianja.
Azontsika jerena izany andohalambo ny kianja nifandimby tamin'ny medaly izay ahitantsika tarehin-tsoratra malaza, ny sasany azo fantarina toy ny tratran'i Cervantes. Na dia tsy tratra aza ny hevitra voalohany, dia ny fametrahana ny vavon'ny mpanjaka ao amin'ny pavillon Royal, ao amin'ny pavillonan'ny miaramila sy mpandresy San Martín ary ny roa hafa kosa dia ireo manana endrika kanto, finoana ary taratasy. Na izany na tsy izany, mahaliana ny mahita ireo zana-kazo mamorona ny kianja sy mamantatra ireo olo-malaza malaza.
Ny fahalianana iray hafa dia milaza amintsika an'izany misy tionelina serivisy izay namakivaky ny kianja hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny toerana. Amin'izao fotoana izao dia biriky izy ireo fa amin'ny serivisy sasany amin'ny faritra ambany dia hitanao ireo andohalambo taloha. Etsy ankilany, ao amin'ny faritry ny lapan'ny tanàna dia misy varavarankely mihidy foana. Izy io dia ao ambadik'izy ireo fa tsy misy efitrano, satria namboarina izy ireo mba tsy hifanaraka amin'ny firindran'ny fanamboarana.
Inona no hatao ao amin'ny Ben'ny tanàna Plaza
Ity kianja ity dia toerana fizahan-tany be mpizaha tany ankehitriny, ka azontsika atao ny mahita bara marobe ao aminy hankafizantsika sakafo maivana rehefa mankafy ny refin'ny kianja. Ao amin'ny faritry ny arcades dia mahita fivarotana sasany misy vokatra mahazatra ihany koa izahay, noho izany dia tsy tokony halahelo ny antsipirihany ianao satria afaka mahita zava-matsiro tena izy. Etsy ankilany, tsy tokony hiala amin'ny Café Novelty isika, izay no zokiny indrindra, nosokafana tamin'ny taona 1905. Ity kafe ity dia efa toerana manan-tantara manana haingo kanto Art Nouveau izay mitondra antsika hiverina amin'ny laoniny ary ahafahantsika manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny sakafo maraina tsara ka hatramin'ny glasy mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Plaza Ben'ny tanànan'i Salamanca
Mandehandeha any Sarajevo